Maitiro ekuisa Qt Musiki paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa Qt Musiki paGnu / Linux
Mumwedzi ichangopfuura IDE yakagadzirwa nekambani yeQT yatora nzvimbo yepakati, iyo IDE iri mubvunzo inonzi QT Musiki uye kubudirira kwayo kuri kukodzera, pakati pezvimwe zvinhu, mukubatanidzwa kwayo muUbuntu SDK.
Iyo Ubuntu SDK kugadzira zvinoshandura maapplication nemaapplication eUbuntu Runhare shandisa QT Musiki. Iyi IDE yakagadziridzwa kuitira kuti chero munhu, angave nyanzvi kana novice, anogona kugadzira chirongwa mune imwe maminetsi, chimwe chinhu icho vazhinji vashandisi vari kusangana nacho uye vachizvionera pachavo.
Zvisinei, chishandiso ichi hachisi chega kuUbuntu asi, inogona kuiswa pane chero kupi kweGnu / Linux yemahara. Nekuisa kwayo hatingazodi kuisa KDE kana Plasma kuburikidza nemaraibhurari eQT, zvichave zvakakwana kurodha pasi yekuisa uye kuva neInternet kubatana.
Qt Musiki chishandiso chinoshandiswa muUbuntu SDK
Kuisirwa QT Musiki kuri nyore kwazvo uye tinogona kuzviita tichishandisa nzira mbiri. Iyo huru uye yakakurudzirwa nzira ndeyekuti uzviite kuburikidza neyepamutemo reposheni. Kumwe kugovera kune Qt Musiki mumahofisi avo epamutemo senge Ubuntu. Asi zvinosuruvarisa kuti hazvisi zvese zvinogoverwa zvine mukana uyu wekumisikidza. Kune avo vasingakwanise kumisikidza Qt Musiki kubva kunzvimbo dzekuchengetedza pane nzira yepamutemo yatinoshandisa isu tinodhawunirodha iyo inosimudza uye anotarisira kuisa QT Musiki.
Kune izvo isu tinoenda ku iyo yepamutemo webhusaiti uye isu tinodhawunirodha iyo yekumisikidza faira, tobva tavhura terminal pane iyo faira iri uye tinonyora zvinotevera
Mushure meizvi, kumisikidzwa kweQT Musiki kuchatanga, kutanga nekutora pakutanga. Saka nenzira iyi isu tichafanira kuve neinternet kubatana.
QT Musiki iri yakazara kwazvo IDE asi zvakare inobvumidza kugona kuwedzera plugins kusimudzira mashandiro eIDE, aya ma plugins anogona kuwanikwa pane yepamutemo Qt Musiki peji kunyangwe paine mamwe mashoma mashoma emahofisi anowedzera anoshanda mune ino IDE.
Ini pachangu ndinofunga ndizvo chishandiso chakazara uye chiri nyore kushandisa iyo chero mushandisi anogona kushandisa, kunyangwe paine mamwe maturusi anogona kuita zvakafanana basa kana pamwe kwete? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Qt Musiki paGnu / Linux
Iyi ndeye VirtualBox 5.1.6